Mamihina ny mpankahala anao? Angamba Tiavo ireo malalanao! | Martech Zone
Ny teny famaranana nataon'i Jay Baer dia iray amin'ireo tsara indrindra hitako tao amin'ny tontolon'ny varotra sosialy. Niresaka momba ny boky ho avy i Jay, Mamihina ny mpankahala anao. Ny fampisehoana nataony dia nahafinaritra ary naneso ny fikarohana mahatalanjona avy Tom Webster sy ny ekipany momba ny fampiasam-bola amin'ny famahana haingana ny fitarainana amin'ny fampitomboana ny orinasanao.
Ny fampisehoana dia miresaka ohatra tsara dia tsara momba ireo orinasa mamaly ny fitarainana sy ny fomba tsara amin'ny orinasa.
Tsy mino aho. Raha ny marina, ny taona talohan'izay tao amin'ny Social Media Marketing World dia nanao famelabelaran-kevitra iray izay nandraisako ny fahadisoana lehibe nataon'ny orinasa tamin'ny media sosialy ary nanaporofo aho fa tsy nisy na iray aza ny lesoka nisy fiatraikany maharitra sy ratsy teo amin'ireo orinasa nahatonga azy ireo.
Tao amin'ny Facebook farany teo, nizara fanamarihana manokana momba ny serivisy seranam-piaramanidina i Jay ary nampahatsiahy ahy avy hatrany ity adihevitra mahavariana teo amin'ny mpanao hatsikana ity aho Louis CK ary Conan O'Brien.
Na dia talanjona aza aho noho ny haitao tsy mampino hita eo an-tanan'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao, diso fanantenana ihany koa aho isan'andro noho ny fitohitohizan'ny fitetezana orinasa hitako an-tserasera.
Tokony hamihina ny mpankahala azy ve i Apple?
Ohatra tsara azoko iresahana voalohany ny Apple. Tena mpankafy an'i Apple aho. Izaho dia iray amin'ireo tranga nut izay nametraka ny fanairana ho an'ny 3AM EST ary nividy ny andiany voalohany an'ny Apple Watches. Tsy andriko ny handray azy eo am-pelatanako.
Mamaky an-tserasera ary misy ny akon'ny feon'ireo teknisianina, bilaogera ary fankahalana Apple mankahala amin'ny fiambenana. Na aiza na aiza izy ireo… ary tsy misy dikany amiko ny hevitr'izy ireo. Ary heveriko fa tsy tokony hisy dikany amin'i Apple ny hevitr'izy ireo. Lafo loatra, tsy fahampian'ny fanavaozana, ny kalitao ary ny olana hafainganam-pandeha… ny fitarainana rehetra avy amin'ny mankahala. Ry mpankahala… iray tapitrisa amidy isan'andro ary ankehitriny dia miverina any ambadiky ny volana Jona. Tsy nankany amin'ny Apple Watch intsony ny haters, nahoana ianao no mamihina azy ireo?
DK New Media Mpankahala afo ary tia ireo tia azy
Tamin'ny taon-dasa, taorian'ny sitrana tamin'ny taona nisavorovoro talohan'izay, dia nanomboka ny fanarenana izahay. Ny ankamaroan'ny olanay dia izaho no diso. Nivelatra tsy nisy loharano ilaina izahay ary avy eo nikoropaka nameno ny banga. Raha tokony hiasa mafy hamantatra ny tena mpanjifa izahay dia saika ny olona rehetra no nangataka fanampiana taminay… ary nofy ratsy izany. Izahay koa dia nanangana infographic momba ny karazana mpanjifa nodoranay.
Nanaiky ny asa niaraka tamin'ny mpanjifa marobe izay nanararaotra sy mora vidy fotsiny izahay. Tsy nijery anay ho mpiara-miasa izy ireo, fa nijery anay toy ny fanamby hanenjika ny denaria farany rehetra. Tsy namihina ny mpankahala anay aho fa nandroaka azy ireo.
Izahay izao dia manao ezaka miavaka amin'ny famitana mialoha ny mpanjifanay ary manome toky fa tena mifanentana amin'ny kolontsaina izahay ary mino fa afaka mahomby amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo. Ny fahasamihafana dia alina sy andro. Manana ny taona tsara indrindra ananantsika izahay, manitatra ny dianay, faly izahay, ary ny asa izay ataonay dia tsara lavitra noho ny teo aloha.
Mandreraka ny fiezahana hampifaly ireo mpankahala anay. Ary noho izany tsy manandrana intsony izahay. Raha misy olona manadoka antsika dia mamaly azy ireo amin'ny fomba tsotra isika - na imasom-bahoaka izany na tsy miankina. Indraindray isika manidy ny tandrony, fa ny ankamaroan'ny fotoana dia mandeha fotsiny isika. Mila mampifantoka ny saintsika amin'ireo mpanjifa mankasitraka antsika isika, fa tsy ireo izay tsy hanakarama antsika velively, hanoro hevitra anay ary hipetraka eo am-pandraiketanay vilany.
Mamihina ny mpankahala anao? Ezaka be loatra. Aleoko tia ny olon-tiako. Izy ireo no nanaparitaka ny teny, nanitatra ny fifanarahana taminay, nahita anay mpanjifa bebe kokoa, ary mankasitraka izay vitanay ho azy ireo.
Miady amin'ny mpankahala ve ireo mpandresy?
Rehefa mijery raharaham-barotra, fanatanjahan-tena, politika, na mpitondra hafa mahomby aho - dia saika mahita olona tsy miraharaha ny fahavalony ary manamboatra ny fahombiazany manokana. Ny tsy fahombiazana hitako dia ireo olona nihaino ny rehetra, nanandrana nampifaly ny rehetra, ary tsy nahatanteraka velively ny fanantenana tsy takatry ny tsena.
Rehefa mijery ireo indostria toy ny finday, tariby, kojakoja, seranam-piaramanidina sy ny hafa aho… hitako ny mpanjifa manao fangatahana mihoatra ny sandan'ny vokatra na serivisy tian'izy ireo aloany. Ary raha tsy mahazo izay tadiaviny izy ireo dia manipy hissy fitaratra amin'ny Internet mba ho hitan'ny besinimaro. Ary raha manandrana manompo azy ireo tsara kokoa ny orinasa ary manampy vola kely vitsivitsy amin'ny faktiorany, dia miantoka ny vidin'ny vahaolana ambany ny mpanjifa.
Ny vinavinako dia raha nanao faharatsiana kokoa ny mpanjifany ny seranam-piaramanidina ______, dia mbola nanangona fiaramanidina ho any amin'ny toerana halehany manaraka izy ireo feno mpanjifa izay nampiasa fikarohana an-tserasera mba hahitana ny vidiny ambany indrindra. Heveriko fa ny ankamaroan'ireo mankahala dia tsy miraharaha ny orinasa fiaramanidina akory, hitaraina izy ireo na eo aza izany. Ary ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia misy hubs napetraka izay saika tsy azo atao ny miala amin'ny marika na dia nikarakara anao aza ianao.
Te Fitiavana? Aloavy izany!
Etsy ankilany, raha mandoa saram-pandraharahana aho, mividy fiara lafo vidy, mandany vola amin'ny fiantohana na fiantohana maharitra, na lohataona ho an'ny solosaina finday lafo vidy kokoa, dia toa tsy nanana olana nisedra ny hafa mihitsy aho. Ny efitrano fandraisam-bahiny an'ny Delta - ohatra - Mahafinaritra ary afaka mividy fidirana amin'ny ankabeazan'ny fitsangatsanganana amin'ny fanampiny kely ianao. Mandritra ny fotoana iandrasan'ny rehetra eo amin'ny maso ny tapakila dia mandray zava-pisotro aho ary ny solontenan'ny Delta dia nanala ny anarako ary niova hevitra mba hampandeha ahy. Tsy misy tabataba, tsy misy mozika… Samy nankasitrahako azy io ary nandoa azy aho.
Mandoa vola fanampiny, mahazo serivisy mahafinaritra aho, saika tsy fotoana fiandrasana, ary valiny eo noho eo. Raha hitaky ny tsara indrindra aho dia tokony ho vonona ny handoa izany. Raha tsy zakako ny tsara indrindra dia tokony hianina amin'izay sisa aho.
Aza diso hevitra aho. Hiezaka mafy aho hanandrana mamily mpanjifa tsy faly. Adidiko farafaharatsiny izany farafaharatsiny satria nanao famatsiam-bola taminay izy ireo. Fa raha ory fotsiny izy ireo na mampijaly ahy na ny mpiasa ao aminay, Tsy misy olona manam-potoana ho an'ny dat! Heveriko fa misy isan-jaton'ny mpankahala an-tserasera izay tokony holazain'ny orinasa amin'ny bugger off.
Jay… tapaka ny asanao.
Tags: fikarohana an'i Edisonmankahala ny mankahala anaoJay Baertiavo ny olon-tianaofitarainana amin'ny InternetFanamarihana an-tseraserafihetseham-potom webster
Apr 15, 2015 ao amin'ny 10: PM PM
Lahatsoratra tsara Doug, misaotra.
Zavatra roa. Tsy resaka blaogy lehibe sy krizy tototry ny haino aman-jery sosialy no resahiko. Tsy nisy ohatra izany tao amin'ny keynote, ary tsy nisy ohatra izany tao amin'ilay boky. Ny tiako resahina dia ny fanehoan-kevitra ratsy isan'andro, fitarainana, hevitra 1 sy kintana 2 izay ahitan'ny orinasa saika ny habeny sy ny karazany tsy mifanaraka hatrany, raha izany rehetra izany.
Mila asa be ve ny famaliana ny fitarainana isaky ny isaky ny fantsona? Mazava ho azy. Saingy ny fikarohana nataonay dia mampiseho fa ny fitomboan'ny fisoloana vava ho an'ny mpanjifa rehefa mamaly ny fitarainana ianao dia lehibe, ary ny fihenan'ny fisoloana vava ny mpanjifa rehefa tsy miraharaha ny firongatra ianao dia mbola lehibe kokoa.
Azon'ny orinasa sasany atao ve ny tsy miraharaha ireo hevitra ratsy sy fitarainana? Eny. Saingy tsy fahita ireo orinasa ireo.
Ary tiako koa ny manazava fa ny resak'i Hug Your Haters dia TSY hoe marina foana ny mpanjifa. Tsy marina izany, ary tsy fahendrena ny mitantana ny orinasanao amin'izany. Ny resahina kosa dia hoe maheno hatrany ny mpanjifa. Fahasamihafana lehibe. Raha ny tena izy, na dia tsy tafiditra tao anatin'ny kabary tao anaty lahateny aza aho, ny tolo-kevitro dia ny tsy hamalianareo mihoatra ny in-droa ny kofehy / fitarainana / bilaogy iray, sns.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika ny tsy fitovizan'ny Mpanenjika Offstage izay mitaraina mitokana, ary ny Onstage Haters izay mitaraina imasom-bahoaka. Ny lakile dia ny fahafantarana fa ny voalohany dia mila valiny, ary ity farany maniry mpihaino. Fanatanjahan-tena ho an'ny mpijery izao ny négatiatianina, ary na mety mety (tianao) hilazana amin'ny mpanjifa voadona (na manelingelina) ny F-OFF ny zava-misy dia indrindra ny an'ny Onstage Haters, ny tena loza dia ny tsy hahafoana izany mpanjifa izany, amin'ny zavatra eritreretin'ny mpijery momba ny orinasanao sy ny soatoavinao.
Jay - misaotra betsaka anao nanokana fotoana hanazavana. Efa nanafatra kopian'ny boky marobe ho an'ny mpiasanay aho satria ho zava-dehibe amin'ny mpanjifanay izany fampahalalana izany.
Apr 20, 2015 ao amin'ny 12: PM PM
Nieritreritra an'io foana aho tamin'ny fomba fijery tsotra fa “tsy dia mety foana ny mpanjifa,… fa izy ireo no mpanjifa”. Ka izany no mahatonga ahy hiadana sy hamaly araka ny tokony ho izy - mikatsaka ny hahafantatra hoe inona ny tena olana ary inona no mety ho valiny sy vahaolana mety. Izany dia nitarika ny fiezahako "hamihina ny mpankahala."
Apr 20, 2015 ao amin'ny 2: PM PM
Tsy mpankafy aho, Curt. Mihevitra aho fa indraindray ny olona dia misangy fotsiny ary ny fitondran-tena ratsy tsy tokony ekena. Mora kokoa ny nilaza fa tsy vita rehefa tompon'ny orinasa heveriko fa!